Ungayiphucula i-PC yakho yakudala kwi-Windows 8.1?
Ukuba okwangoku usebenzisa iWindows Vista okanye iWindows 7 okanye 8 kwiPC, impendulo nguewe, ngokuqinisekileyo ungayihlaziya ibeyiWindows 8.1 - kwaye iya kubaleka ngokukhawuleza kuneVista, ubuncinci.
Ngokusesikweni unga (akufuneki, kodwa unako ) nyusa ukuba iPC yakho ubuncinci:
1 GHz okanye iprosesa ekhawulezayo- iprosesa ye-Intel okanye ye-AMD. Inguqulelo eyahlukileyo yeWindows, ebizwa ngokuba yiWindows RT, isebenza kudidi olwahlukileyo lweeprosesa- kodwa unokuthenga kuphela olo hlobo lweWindows efakwe kwangaphambili kwikhompyuter entsha.
1GB yememori ye-RAM yenguqulo engama-32, 2GB ye-64-bit.
I-GB ENGAMA-16 (kwi-32-bit) ukuya 64GB (Kwi-64-bit) yendawo ekhoyo yedrive drive. Ewe kunjalo, yile yeWindows. Ukuba ufuna ukufaka naziphi na iinkqubo okanye ugcine nayiphi na idatha, uzakufuna i-leeeeeetle ngakumbi.
I-DirectX 9 Imizobo khadi ene-WDDM 1.0 okanye umqhubi ophezulu. Onke amakhadi evidiyo enziwe kule minyaka mihlanu idlulileyo ahlangabezana nale mfuno.
Nazi iimfuno ezimbini ezongezelelweyo eziphambili ekusebenziseni i-tile-based, i-Metro screen ye-Windows 8.1-ucinga ukuba ufuna ukusebenzisa iMetro:
Iscreen esithintekayo. Ewe ungasebenzisa imouse kwi-tiles, kwi-interface yokuntywila- abantu abaninzi benza yonke imihla. Kodwa awuyi kuzixabisa iinkqubo zethayile.
Isisombululo sesikrini se-1366 × 768. Ngapha koko, ungaqhuba iWindows 8.1 ngescreen esingu-1024 × 768, kodwa awungekhe wenze iithayile ngokukhawuleza - beka ii -apps ezimbini zethayile zeMetro ecaleni-ngaphandle kokuba unescreen esibaleka ubuncinci iipikseli ezili-1366 ububanzi kunye nee-pixels ezingama-768 ukuphakama. Unokufumana isikrini esikhudlwana, kwaye siya kuqhuba yonke into-ukuba isikrini sibanzi kuneepikseli ezili-1500, unokukroba ii -apps ezintathu.
Umbuzo onzima ngakumbi nokuba ingaba kufanele Uphuculo lundazisa kwingxoxo yemetaphysical. Cinga ngendlela ezi zinto zilandelayo ezisebenza ngayo kuwe:
Ukuba unayo iPC eyenziweyo, Akukho mbuzo kufuneka uphucule kwiWindows 8.1. Chukumisa kwicala le-Win8.1 lethayile yeMetro ingcono ngokungaphezulu kunokubamba kwiWindows 7.
Ukuba usebenzisa imouse kunye nekhibhodi kwaye awucwangcisi ukufumana isikrini sokuchukumisa, ufuna iWindows 8.1 kuphela ukuba ufuna enye yeempawu ezintsha, okanye ukuba enye yeeVenkile zikaGcino lweWindows ikukhathaza. Ukuba izibonelelo ezilapho azibeki thontsi phantsi komqolo wakho, hayi, awudingi Windows 8.1. Gcina ngeWindows 7.
isicaphucaphu anti anti otc
Iipilisi ezili-114 zikuphakamise
Idosi enkulu yecymbalta